Realme 7i ongororo: Nechinangwa chehutsva
Realme yanga ichirovera pamusika we smartphone neinenge nhare nhatu pamwedzi kubva pakasimudzwa kukiya. Nepo kuri kurwadza kwatiri isu vaongorori kuti tishande nekuramba tichichinjisa maSIM makadhi vhiki rega rega, kuva nezvimwe sarudzo zvinogara zvirinani. Mukutsvaga kupa sarudzo, Realme yakauya neiyo Realme 3i - imwe foni inodhura yeApple yakakwira pazvinhu asi ichitanga paRs 7.
Pakutanga kuona, iyo Realme 7i inotaridzika senge yakadiridzwa-pasi vhezheni yeiyo Realme 7 - maitiro akateverwa naReme yeiyo Realme 6i pakutanga kwegore rino. Kunyangwe ichiuya senge yakanaka smartphone kana ichienzaniswa nemakwikwi, iko kudzikisira munzira dzakawanda kubva kune Realme 6i. Mushure mekuishandisa kwemazuva gumi, ndiri kunetsekana nezvikonzero zvekuti nei uchifanira kuitenga pamusoro peiyo Realme 10i, kana iyo Motorola Moto G6.
Kugadzira uye kuvaka
Realme yatanga kuenda kune matsva dhizaini neiyo Realme 7 akateedzana. Ini pachangu ndinofunga iyo Realme 7 uye Realme 7 Pro ari pakati pemafoni akanaka kwazvo aunogona kutenga isingasviki Rs 20,000 - iyo matte pedzisi pamwe neinonaka dhizaini sarudzo. Zvinosuruvarisa, iyo Realme 7i haiswedere padyo nevanun'una vayo vanodhura.
Iyo Realme 7i inotora dhizaini dhizaini yeiyo Realme 7 asi inoita kuti ayo ekuderedza mutengo ave pachena. Tarisa pane glossy kumashure kwepaneru, semuenzaniso. Yakanyanya kupenya uye inonzwa yakachipa kubata muruoko. Izvo zvinondiyeuchidza nezve Realme nhare kubva gore rakapfuura dzichipfuura girazi kupera. Iyo epurasitiki zvinhu hazvinzwi kusimba uye mushure memazuva mashoma, zvakabata mabara zviri nyore. Pamusoro pezvo, inoda guruva uye zvigunwe zvemunwe.
Nyasha chete inoponesa ndeye rectangular kamera module iyo inopa imwe pfungwa yechinyakare dhizaini pane iyo 7i. Iyo capacitive yeminwe yekunzwa inogara kumashure kuseri kweiyo furemu. Iyo furemu pachayo ingangoita zvine hungwara hwakavharika epurasitiki unibody shell inoteedzera matte esimbi zvigadzirwa kubva kudhura mafoni. Iwe unowana hofoni jack, chiteshi che USB-C chakananga pasi. Mabhatani ari nyore kusvika asi haana akakwana kiyi yekufamba - handizive kuti izvi zvichagara kwenguva yakareba sei.
Iyo Fusion Green ruvara inotaridzika kunge yakasarudzika kune imwe nhanho uye ndinoshuva kuti Realme isarudze matte kupera kwekumashure. Iko kumberi kunotungamirwa ne6.5-inch kuratidzwa nemipendero yakamanikana pamativi matatu. Chirebvu chinoonekwa uye ndizvo zvakaitawo punch-hole cutout. Ini ndinofunga iyo Realme 7i uye Redmi Cherechedzo 9 ndiyo chete mafoni mune ino chikamu kudzikisa notch - ndigadzirise kana ndakanganisa.
Kunyangwe paine muviri wepurasitiki, iyo Realme 7i inorema 188 gramu, inova inorema zviyero zvangu zvazvino. Realme yaizopokana kuti iri nekuda kweiyo hombe 5000mAh bhatiri.
Mumakore mashoma apfuura, Realme yakagadzira tariro yakakura yekutarisira kuita. Yese foni yeRealme yandakashandisa gore rino yanga ichitungamira kirasi nekuita kwayo. Nyaya iripo ndeye Realme 7 inotamba mitambo senge hapana imwe foni pamutengo wayo. Ini ndinoshamisika kuti chii chakaitika neiyo Realme 7i, nekuti uyu mutambi anoenderana. Pane mazuva andaisazoda kuishandisa zvekare. Nditendere nditsanangure.
Realme ichakwevera kutarisisa kwako neiyo 90Hz yekuvandudza mwero wekuratidzira, iri pakati pemakirasi-anotungamira ekuratidzira iwe aunowana mune Rs 12,000 foni. Izvo izvo Realme isingaratidze ndeye 720p resolution. Iyo 720p inoratidzira haisi nyaya uye muzviitiko zvakawanda zvekushandisa, inoshanda chaizvo. Ini handina kuwana pixelated kana blurry interface mukati meiyo UI. Mifananidzo nezvinyorwa zvakaratidzika kupinza. Iyo skrini pachayo inoratidzika seyakajeka, kunyanya neiyo Realme's UI. Iyo 90Hz yekuvandudza mwero inogadzira kutsetseka kupuruzira uye mifananidzo.
Zvinosuruvarisa, kuverengera kwezuva kwakajeka. Zvakare, iyo 720p inoratidzira zvinoreva kuti iwe unogona kuona mavhidhiyo max kunze pa720 resolution, inova bummer. Iyo Redmi Cherechedzo 9 yemutengo mumwe cheteyo inopa 1080p resolution yekuratidzira.
Iyo 90Hz yekuvandudza mwero inogona kukwezva ma geeks asi haina zvishoma zvainoita kuti uwane chiitiko chiri nani. Iyo 7i inoshandisa Qualcomm Snapdragon 662 chipset yakabatana neinosvika 4GB RAM uye 64GB yekuchengetedza. Ini ndakamboshandisa iyo Moto G9 ine iyo Snapdragon 662 uye ini handina kunyatsofadzwa nekuita. Iyo chip yakanaka asi inoda kugadziridzwa kuti uwane zvakanakisa mairi.
Pane iyo Realme 7i, inofanirwa kubata neinorema Realme UI uye ndipo panotangira nyaya. Kugara uchiita mabasa akadai sekupuruzira, kuvhura maapplication, kutumira mameseji paWhatsApp, kutarisa mavhidhiyo uye kunyange kutamba mitambo yemhando yepamusoro mune yakanaka yefoni yekirasi yayo. Nekudaro, uku "kuita kwakanaka" hakuenderane uye kazhinji kacho nguva, ini ndaipupurira mifananidzo inodzedzereka uye ndakanonoka nguva yekuremerwa kwemaapp.
Ini pakutanga ndakafungidzira kuti paive nenyaya neiyo software vhezheni uye ndakamirira bug kugadzirisa chigamba. Izvo zvaiita kunge zvisingaite. Kunyangwe izvozvi, inoshanda zvakanaka pane dzimwe nguva asi yakawanda yenguva, iri kunetseka kufema. Pamwe software yacho haina optimizations, kupihwa yatove isina kusimba Snapdragon 662 chip. Kutamba kunongoitika paRealmei 7i - Kudanwa kweDuty Mobile kwaive kusarongeka uye zvaivewo Asphalt 9. Mitambo yakaita seCandy Crush uye Shadow Fight 2 yaive yakanaka hazvo.
Realme UI pachayo yakafanana iwe yaunowana pane chero imwe 2020 Realme smartphone. Iyo dhizaini yakachena uye ese akakosha mabasa ari nyore kuwana. Realme haifaniri-kutakudza akawanda echitatu-bato bloat maapplication asi pane gumi nemaviri eRealme maapplication ayo vazhinji vedu vangave vasingade. Unogona uninstall mamwe acho asi mamwe akanamira kumusana weiyo system. Pane zvakawanda zvemasarudzo ekugadzirisa foni yako kune zvemukati zvemukati. Iyo Realme browser, zvisinei, inoramba ichikanda kumusoro ziviso dzenhau nguva dzese.
Gudzanzwi rimwe chete tinny pane kwese kwaro uye ini ndanga ndisingafarire zvikamu zvangu zveYeTibe pazviri. Nekutenda, iwe une sarudzo yekuvhara wired headphone kana maviri isina waya mahedhifoni. Iyo Realme Buds Air Pro yandakanga ndapa iri nyore kubatanidza kune chishandiso. Cellular network yekugamuchira yaive yakanaka uye ini handina kuona zviitiko zvekudonha kwenetiweki.
Iyo Realme 7i inowana 64-megapixel main kamera kumashure ine aperture yeF1.8. Iyi paired kune 8-megapixel Ultra-yakafara kamera, 2-megapixel macro kamera uye 2-megapixel monochrome kamera. Iyi setup yakafanana neiyo iri paRealme 7 uye mune chaiwo-epasi mamiriro, inoita zvakafanana.
Nekudaro, iwe uchaenda kunotora yakanaka kamera kuita masikati, asi yakaderera mwenje mashandiro anodonha. Mumamiriro akajairwa, iyo kamera yakaringana mumamiriro ezuva. Kupinza hakuna kunaka uye kana iwe ukaswededza, pane kurasikirwa kwakakosha muhunhu. Mumamiriro ezvinhu ane makore, zvinowedzera kuipa sezvo ruzivo rwacho ruchipfava kuti rivanze tsanga. Mune iyo Night mode, iyo inopinza inodonha uye iwe paunowana yakajeka mifananidzo, yakawanda yenyaya yako inoenda yakapfava. Realme yechinyakare yakanyanyisa kuwanda color profile inoita kuti mafoto aite seanoshamisa. Iyo 64MP inopinza zvishoma zvine ruzivo asi inorwisana nemwenje unonyengera
Iine-8-megapixel ultrawide kamera, ruzivo rwunotora hit uye mavara anogara achisimudzirwa zvisina basa. Kukanganisa kumakona kunoonekwa uye ini ndakaona kurasikirwa kwekupinza paunobva kure nepakati pefuremu. Mune sub-par mwenje, zvakanakisa kudzivirira iyi kamera kune chero chinangwa.
Zvekare zvakare, kune 2-megapixel macro kamera ine yakatarisa kureba kwe4cm. Iyo yakanaka mune yakajeka-mamiriro ezvinhu asi mhando inotambura, ine yakapfava ruzivo uye akawedzera mavara. Yakadzika mwenje mamiriro anoita kuti kamera inetseke zvisirizvo uye zvakanakisa kuti zvidzivise iyo husiku. Iyo monochrome kamera theoretically inobatsira neruzivo asi ini handina kuona chero mutsauko. Mifananidzo yemifananidzo yemifananidzo inotaridzika zvine mutsindo neakanaka kupatsanurwa kwenyaya.
Iyo 16-megapixel yekumberi kamera inotora yakawanda mijenya pamusoro wenyaya uye inowedzera mavara kuita kuti ma selfies aonekwe anoshamisa. Iyo ine hukasha post-kugadzira, kunyangwe isina runako maitiro, inokanganisa kutarisa dzimwe nguva. Chinyorwa kupatsanurwa muiyo portrait mode kwakanaka asi zvinonetsekana nekuratidzwa kumashure.
Realme yakanamatira bhatiri re5000mAh mukati meiyo 7i uye sezvingatarisirwa, inogona kugara zuva rese uye kuwedzera kumaawa mashoma ekutanga ezuva rinotevera. Mashandisiro angu aisanganisira akawanda ekutumira mameseji paWhatsApp neSlack, pamwe chete nemaminitsi makumi matatu ezvirongwa zveYouTube, kushambadzira midhiya yenhau, awa yekutenderera mumhanzi - zuva rega rega neiyo 30Hz modhi yakavhurwa. Iyo 90W inokurumidza kuchaja inozadza iyo hombe bhatiri mumaanopfuura maawa maviri. Ndinoshuva kuti Realme ipe rutsigiro kune yayo 18W inokurumidza kuchaja system.
Realme 7i: Unofanira kuitenga here?
Iyo Realme 7i yakanaka smartphone, ichitarisa ese maficha uye maratidziro ayo aanopa pamutengo wayo. Pfungwa yekuratidzira 90Hz pamutengo weRs 11,999 inokwezva. Pamusoro pezvo, Realme yakakanda mukamera-megapikisheni makumi matanhatu nenhanhatu, isina mumwe wevaikwikwidza nayo. Iwe unogona kutaura kuti izvi zvinhu zvega zvinopa iyo Realme 64i kodzero yekuzvirumbidza pamusoro peiyo Redmi Note 7 uye Moto G9.
Zvinosuruvarisa, ruzivo rwevashandisi pacharo runotambura. Iyo Realme 7i inoita zvisingaenderane uye yayo 720p inoratidzira inoperevedza neiyo 1080p kuratidza pane iyo Redmi Note 9. Iyo 64-megapixel kamera haipe iyo inoonekwa yepamusoro iwe yaunotarisira kubva kune yakakwira kamera kamera. Iyo yekuvaka mhando ndeye tacky uye ini ndinokahwira kuti kwenguva yakareba sei iwo mabhatani acharamba ari mumaoko emunhuwo zvake.
Unogona kupokana kuti ndiri kunyunyuta zvakanyanya nezve foni inodhura maRs 11,999. Nekudaro, iyo Redmi Cherechedzo 9 ipakeji yakatenderera zvakanaka pamutengo mumwe chetewo. Iyo Motorola Moto G9 pamitengo yakafanana neiyo imwechete chipset inopa zvirinani kuita kwese, hupenyu hwebhatiri repamusoro uye neakanakisa mashandiro ekamera muchikamu chayo. Pamusoro pezvo, ndinokurudzira kuti ushandise imwe Rs chiuru uye uwane iyo Realme 1,000i. Iyo Realme 6i inopa kuita kuri nani neiyo Helio G6T chipset, sarudzo yekushandisa iyo 90W nekuchaja nekukurumidza, zvirinani kuvaka mhando uye 30p kuratidza ine 1080Hz zororo reti.